आईओएस ((I) को लागि ट्रिक्स: आईक्लाउड खाली ठाउँ | आईफोन समाचार
आईओएस ((I) को लागि युक्तिहरू: आईक्लाउड खाली ठाउँ
यस हप्ताको पोडकास्टमा उद्घाटन गरिएको आईओएसका लागि सुझाव र युक्तिहरूको अंशको लागि हाम्रो पोडकास्टमा तपाईंहरू मध्ये धेरैले हामीलाई सोधे पछि, हामीले पनि सोही विषयको लागि लेखहरूको श्रृंखला समर्पण गर्नु राम्रो विचार हो भन्ने सोच्दछौं। हामी आईक्लाउड खाली ठाउँ कसरी खाली गर्ने भनेर वर्णन गरेर सेक्सन रिलीज गर्छौं, एक समस्या जुन तपाईं धेरै निश्चित रूपमा एक भन्दा बढी पटक पाउनुभएको छ र कि अब आईक्लाउडमा फोटोहरूको आगमनको साथ यो अझै अधिक बारम्बार हुनेछ। के तपाईं अधिक स्थानको लागि भुक्तान नगरी एप्पल क्लाउडमा तपाईंको भण्डारण राम्रोसँग प्रबन्ध गर्न चाहनुहुन्छ? ठीक छ, पक्कै पनि यी सुझावहरू तपाईंको लागि उपयोगी छन्।
1 अनुप्रयोग डेटा हटाएर खाली ठाउँ
2 आईक्लाउड फोटो लाइब्रेरी बन्द गर्नुहोस्
3 आईक्लाउड ब्याकअप हटाउनुहोस्
अनुप्रयोग डेटा हटाएर खाली ठाउँ
आईओएस अनुप्रयोगहरूले आई-क्लाउडमा धेरै डाटा भण्डार गर्दछ। केही डाटा उपकरणहरू बीच सिnc्क गर्न केवल एक सानो KB हो, तर अरूले धेरै MB र GB भण्डार गर्दछ फोटोहरू अपलोड गर्दा, भिडियो, आदि कुन अनुप्रयोगहरूले आईक्लाउड खाईरहेको छ धेरै नै सरल छ, र साथै त्यो डाटा मेटाउदै छ।
सेटिंग्स> iCloud> भण्डारण, स्क्रिनमा जानुहोस् जहाँ तपाईं कुल र उपलब्ध भण्डारण देख्नुहुनेछ। "भण्डारण प्रबन्ध गर्नुहोस्" मा क्लिक गर्नुहोस् र तपाईं मेनु पहुँच गर्नुहुनेछ जहाँ तपाईं विभिन्न सेक्सनहरू देख्न सक्नुहुनेछ। अब हेरौं "कागजातहरू र डेटा" सेक्सन जहाँ त्यहाँ अनुप्रयोगहरूको एक सूची हुनेछ डाटासँग उनीहरूले आईक्लाउडमा भण्डारण गरेका छन्, आकार द्वारा क्रमबद्ध। ती मध्ये एउटामा क्लिक गरेर तपाईंले एक विशेष जानकारी स्क्रीन, र माथिको दायाँ कुनामा "सम्पादन" बटन क्लिक गरेर तपाईं सबै डाटा मेटाउन सक्नुहुन्छ.
ती अनुप्रयोगहरूको डाटा मेटाउन यो धेरै उपयोगी विकल्प हो जुन तपाईं आईक्लाउडमा अपलोड गर्न चाहनुहुन्न, किनभने यो उपयोगी देखिदैन वा किनभने त्यो अनुप्रयोग अब प्रयोग भएको छैन। सबै भन्दा धेरै ठाउँ ओगटेको अनुप्रयोग मध्ये एक व्हाट्सएप हो, ब्याकअप पछि तपाई आईक्लाउडमा बनाउनुहुन्छ सबै फोटो र कुराकानी अपलोड गर्दछ, धेरै जीबी कब्जा गर्न धेरै सजिलो हुँदै।
आईक्लाउड फोटो लाइब्रेरी बन्द गर्नुहोस्
आईसीक्लोड फोटो लाइब्रेरी आईओएस of को एक उपयोगी उपयोगी नवीनता हो, तर GB जीबी खाताहरूको लागि अत्यधिक सिफारिश गरिएको छैन किनकि यो चाँडै नै आईक्लाउडमा उपलब्ध ठाउँबाट बाहिर जान्छ। यदि तपाईं यो विकल्प प्रयोग गर्न चाहानुहुन्छ भने, तपाईंले गम्भीरतापूर्वक आफ्नो iCloud खाता विस्तार गर्न विचार गर्नुपर्छ। यदि होईन भने, त्यो विकल्पलाई निस्क्रिय गर्नुहोस् र तपाईं धेरै डाटा प्राप्त गर्नुहुनेछ (अन्य GB पनि) अन्य डाटाको साथ प्रयोग गर्न। सेटिंग्स> iCloud> भण्डारण> भण्डारण प्रबन्ध गर्नुहोस्> iCloud फोटो लाइब्रेरी मा जानुहोस् र «निष्क्रिय र मेटाउनुहोस् on मा क्लिक गर्नुहोस्।
दिमागमा राख्नुहोस् कि यदि तपाईले यो विकल्प निस्क्रिय गर्नुभयो भने, कुनै पनि उपकरणको आईक्लाउडमा भण्डार गरिएका सबै फोटोहरू हराउनेछन्। केवल मामला मा एप्पलले तपाईंलाई सुधार गर्न days० दिन प्रस्ताव गर्दछ, त्यसोभए यदि तपाइँ पछुताउनु हुन्छ भने, तपाइँ तपाइँका फोटाहरू पुनःप्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ।
आईक्लाउड ब्याकअप हटाउनुहोस्
आईक्लाउडमा ब्याक अप धेरै सुविधाजनक छ। आईओएस it ले स्वचालित रूपमा गर्दछ जब तपाईंको उपकरण पावर र एक वाइफाइ नेटवर्कमा जडित हुन्छ, जुन दुर्घटनामा हुने नोक्सान, चोरी वा ढाँचा अघि साँच्चिकै एक जीवन रक्षाकर्ता हुन सक्छ। तर ब्याकअपले धेरै ठाउँ लिन्छ। दिमागमा राख्नुहोस् कि यदि तपाईंसँग धेरै उपकरणहरू छन् भने, सबैजना उही खातामा ब्याक अप गर्नेछन्, र यो सजिलो छ कि प्रतिलिपिहरू मात्र तपाईंसँग भएको GB जीबी प्रयोग गर्दछ।
त्यहाँ धेरै विकल्पहरू छन् जुन यसलाई ठीक गर्न सक्दछ:
पुरानो उपकरणहरुको प्रतिलिपि हटाउनुहोस्: निश्चित रूपमा यदि तपाईं सेटिंग्स> iCloud> भण्डारण> भण्डारण प्रबन्ध गर्नुहोस् तपाईंले धेरै बैकअप प्रतिलिपिहरू देख्नुहुनेछ, केही तपाईंसँग अबदेखि नभएको पुरानो उपकरणहरूबाट। त्यो पुरानो उपकरणको प्रतिलिपिमा क्लिक गर्नुहोस् र यसलाई मेटाउनुहोस्।
महत्वहीन उपकरणहरूको आईक्लाउड ब्याकअप बन्द गर्नुहोस्। के तपाईको आईप्याड को ब्याक अप गर्नु महत्वपूर्ण छ? धेरैका लागि यो सायद हुन सक्दैन, र यसले आवश्यक ठाउँ लिइरहेको छ। पहिले जस्तै उही चरणहरू अनुसरण गर्नुहोस् र यसलाई हटाउनुहोस्। त्यसो भए आईप्याड सेटिंग्समा जानुहोस् र आईक्लाउडमा ब्याकअप असक्षम गर्नुहोस्।
कुन अनुप्रयोगहरू जगेडा गरिएको छनौट गर्नुहोस्। सेटि Settingsहरू भित्र> आईक्लाउड> भण्डारण> भण्डारण प्रबन्ध गर्नुहोस् तपाईले कन्फिगर गर्न चाहानुभएको उपकरण छनौट गर्नुहोस् र तपाईले प्रतिलिपिको सबै जानकारीको एक मेनू देख्नुहुनेछ, कुन अनुप्रयोगहरू समावेश छन् र त्यस अनुप्रयोगमा कति अनुप्रयोगले ओगटेको छ। ध्यानपूर्वक हेर्नको लागि यहाँ धेरै चीजहरू छन्: यदि तपाईंसँग फोटोहरू आईक्लाउडमा छन् भने, तपाईं किन क्यामेरा रोल आईकक्लडमा चाहनुहुन्छ? वा यदि तपाईंसँग आईक्लाउडमा व्हाट्सएपको प्रतिलिपि छ भने, यसलाई किन तपाईंको उपकरणको ब्याकअपमा समावेश गर्नुहोस्? कुन अनुप्रयोगहरू तपाईले वास्तवमा प्रतिलिपिमा समावेश गर्न चाहानुहुन्छ र निष्क्रिय नगर्नेहरू निस्क्रिय गर्नुहोस् हेर्नुहोस्, तपाईले देख्नुहुनेछ कि अर्को प्रतिलिपिको लागि चाहिने खाली ठाउँ कसरी कम हुन्छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: आईफोन समाचार » एप्पल उत्पादनहरू » iCloud » आईओएस ((I) को लागि युक्तिहरू: आईक्लाउड खाली ठाउँ
रिकार्डो ई। भन्यो
कस्तो राम्रो सहयोग। म iCloud मा ठाउँ को अधिग्रहण अनुरोध सन्देश संग पागल हुन लागिरहेको थियो
रिकार्डो ई लाई जवाफ दिनुहोस्।
एक आईफोन प्रयोगकर्ताको जेबमा विस्फोट हुन्छ जुन तेस्रो डिग्री जलेको हुन्छ
Lunatik एप्पल वाच को लागी एक जलरोधक केस तैयार गर्दछ